Fanadiovana fahalalana ho an'ny fandriam-pahalemana eran-tany - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Fanadiovan-tena momba ny fahalalana momba ny fandriam-pahalemana
Ny Peace Education Global Knowledge Clearinghouse no loharano lehibe indrindra manerantany amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana.
Momba & Torohevitra momba ny fampiasana ny trano fanadiovana
Miaraka amin'ny tahiry fikarohana momba ny fandaharam-pianarana fandriam-pahalemana, vaovao, fikarohana, tatitra, ary fandalinana eran'izao tontolo izao notontosain'ny Global Campaign for Peace Education sy ireo mpikambana ao aminy, ny Clearinghouse dia ivon-toeram-pahalalana ho an'ny mpikaroka, mpanao politika, mpamatsy vola, ary mpitsabo.
Mampiasa ny trano fanadiovana
Tsindrio ny lohateny hoe hanokatra azy!
Sivana azo karohina / Sivana
Azonao atao ny mitady ao amin'ny Clearinghouse amin'ny alàlan'ny fikarohana misokatra amin'ny alàlan'ny boaty lahatsoratra. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampiasa ireo sivana telo azo karohina sy azo alain-tahaka:
Sokajy farito ny karazana loharano. Misy sokajy lehibe 20 eo ho eo, ao anatin'izany ny fandaharam-pianarana, ny vaovao, ny tatitra, ny hevitra, ary ny fikarohana.
Tags farito ny ifantohan'ny loharano. Ny ankamaroan'ny fidirana dia hanana tag maromaro. Amin'izao fotoana izao, misy tag misy 700+, manarona lohahevitra maromaro manomboka amin'ny zon'olombelona # hatramin'ny fianarana #transformative ho an'ireo mpampandry tany #youth.
Firenena / Faritra eran-tany manondro ny firenena / firenena na faritra maneran-tany ifantohan'ny loharano. Miseho amin'ny CAPS REHETRA ny faritra manerantany.
Miaraka amin'ny efa ho 1800 ny fandefasana ankehitriny, ary ny loharano 30-50 ampiana isam-bolana, ny Clearinghouse dia tsy mitsaha-mivelatra. Ny Clearinghouse koa dia eo an-dalam-pandrosoana. Ny ekipanay mpilatsaka an-tsitrapo dia miasa mafy amin'ny "fanamarihana" lahatsoratra miaraka amina lohahevitra lehibe sy firenena hahatonga ny tahiry ho azo karohina kokoa sy ho an'ny mpikaroka. Hatramin'ny 1 Jolay 2020 izahay dia "nanisy marika" ny antsasaky ny fanangonana atiny. Mitady mpilatsaka an-tsitrapo foana izahay hanampy amin'ny fanampiana votoaty vaovao (manana backlog misy loharanom-bola 100+ vonona hanampy izahay). Raha te-hanolo-tena hanohana an'ity tetik'asa ity ianao, ary raha manana traikefa amin'ny tranonkala (wordpress) fototra ianao, dia mifandraisa aminay.
Ampio amin'ny famoriam-bola
Ny Global Campaign for Peace Education dia manasa ny mpikambana ao aminy hanome vaovao, fikarohana, fandaharam-pianarana, tatitra ary famakafakana any amin'ny Clearinghouse. Ankoatry ny fanasongadinana ireo fandraisana anjara eto ireo dia hizara amin'ny tranokalan'ny Campaign koa izy ireo, haparitaka amin'ny alàlan'ny lisitry ny mailaka anay ary halefa amin'ny media sosialy. Tsindrio eto raha hizara ny loharano anananao ary handray anjara amin'ny Clearinghouse.
Firenena / Faritra eran-tany